हिलिहाङ गाउँपालिकामा कर्मचारी अटाएनन् | स्थानीय तह | साझामन्च
हिलिहाङ गाउँपालिकामा कर्मचारी अटाएनन्
साझामञ्च, प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २२ 17:33:46
पाँचथर । संविधानले स्थानीय तहलाई ‘स्वायत्त सरकार’को रुपमा परिभाषित गरेर स्थानीय तह एक्लैले प्रयोग गर्नसक्ने २२ ओटा अधिकार प्रदान गरेको छ । यस अतिरिक्त स्थानीय तह र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र (संघीय) सरकारले प्रयोग गर्ने साझा अधिकारसमेत छन् ।
स्थानीय तहहरु आफ्ना अभ्यासले ‘सरकार’ जस्तै देखिएका पनि छन् । तर, पूर्वाधारको अभावमा केही स्थानीय तहहरुको अवस्था भने अत्यन्तै नाजुक रहेको पाइन्छ ।
१५ करोड बढी विकास बजेट भएको हिलिहाङ गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको पञ्चमी गाविसको कार्यालयमा छ । जहाँ ४ वटा कोठा र एउटा सानो सभाहल छ । गाउँपालिकामा १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका आ–आफ्नै कार्यकक्ष पनि ।
जम्मा २ वटा कोठामा १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले अटाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ । नजिकै न भाडामा उपयुक्त कोठा पाइने सम्भावना छ, न त तत्कालै गाउँपालिकाले भवन निर्माण गर्न सक्छ ।
साविकका भारपा, सुभाङ, पञ्चमी र अमरपुर गाविस गाभेर निर्माण गरिएको यो गाउँपालिकाको केन्द्र आवश्यक पूर्वाधार रहेको मेची राजमार्गमा पर्ने गोपेटारमा सार्ने प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाले नगरेको पनि होइन । त्यहाँ भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिए सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुने गाउँ कार्यपालिकाको ठहर थियो ।
तर, गाउँसभाले कार्यपालिकाको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिदिँदा कर्मचारी कहाँ राखेर कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने चिन्ता गाउँपालिकालाई छ । केही दिनअघि गाउँपालिका प्रमुख भूवानीप्रसाद लिङ्देनलाई उनकै कार्यकक्षमा भेट्दा उनले ठट्यौली गर्दै भने “हामी बहुमत जनप्रतिनिधिहरुलाई यही ठाउँ उपयुक्त लाग्यो ।” तर, अहिले आएर यहाँबाट काम गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ भन्ने सबैले महशुस गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।
सिद्ध माध्यमिक विद्यालयको छेवैमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्रको आसपासमा न भाडामा लिन सकिने कच्ची र पक्की घर छन् न त सरकारी कार्यालयका भवन नै । केन्द्र नजिकैको घरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत केही कर्मचारी भाडामा बसेका छन् । गाउँपालिकामा भर्खरै सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भए ।
इन्जिनियर र सव–इन्जिनियरले काम गर्न थालेका छन् । तर, उनीहरुका लागि कार्यकक्ष छैनन् । गाउँपालिका प्रमुख लिङ्देन थप्छन् “गाँस र बासकै व्यवस्था हुन सकेको छैन्, अनि कसरी कर्मचारीले काम गर्न सक्नुहुन्छ ?” गाँउपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष मदन गौतम अब बस्ने गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले यस विषयमा निर्णय लिने बताउँछन् ।
विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको भवनमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा हिलिहाङमा यस्तो अवस्था आइपरेको हो । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीले सहज रुपमा कार्यसम्पादन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने गौतमले वताए ।
सुनसान केन्द्र – व्यस्त वडा
गाउँपालिकाको कार्यालयका सहयोगी छत्र सुवेदी दैनिक ३–४ जना सेवाग्राही गाउँपालिकाको केन्द्र आउने गरेको बताउँछन् । काम भएर भन्दा पनि गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीसँग भेटघाट, छलफल गर्न उनीहरु आउने गरेका हुन् ।
गाँउपालिकाले तय गरेका विकास योजनाहरु कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन मात्रै लागेका कारण पनि यस्ता काम लिएर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी गाउँपालिका जानु परिसकेको छैन ।
गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसान रहँदा वडा कार्यालयहरु भने व्यस्त छन् । गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रशासन हेर्ने तथा वडा नं. ६ को कार्यालयको कामसमेत गर्दै आएका नायव सुब्बा देवेन्द्र कटुवाल वडामा भने काम भ्याई–नभ्याई भएको बताउँछन् ।
“सिमित कर्मचारी छौँ, हामीलाई भने काम भ्याउन गाह्रो परिरहेको छ” कटुवालले भने । विकास निर्माणका काम अघि बढिसकेपछि सिमित कर्मचारीले काम सम्पन्न गर्न गाह्रो पर्ने उनको भनाई छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले किसानलाई विभिन्न कृषि सामग्री वितरण